Mangaphi AmaNgqina KaYehova Ehlabathini Lonke?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBasque IsiBhulu IsiCebuano IsiChichewa IsiChol IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGalician IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLithuania IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaya IsiMingrelian IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTankarana IsiTarascan IsiTelugu IsiTigrinya IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiValencian IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu
Ngo-1987, uLyman Swingle, ilungu leQumrhu Elilawulayo lamaNgqina KaYehova, wathetha nabantu abayi-63 580 ababehlanganisene kwibala iPlaza Monumental, eliseValencia, eVenezuela. Abaninzi bahamba ngebhasi ubusuku bonke ukuze baye kummamela. Ethetha nesihlwele, uMzalwana uSwingle wathi: “Aniselilo isebe elincinane. Ngoku nilisebe elikumlinganiselo ophakathi. Ibe kubonakala ngathi, ngokukhawuleza ngenye imini niya kuba ‘neqela labavakalisi abayi-100 000’!”
Ngaloo nyaka ka-1987, iVenezuela yayinabavakalisi abangaphezu kwe-38 000—amaNgqina KaYehova awayekukhuthalele ukuvakalisa iindaba ezilungileyo zoBukumkani. Ngeloo xesha, yayingamazwe asibhozo kuphela awayenabavakalisi abangaphezu kwe-100 000.
Ulwando lwamaNgqina KaYehova ehlabathini lonke luyancomeka. Emva kweMfazwe Yehlabathi I, yayingamawaka ambalwa kuphela awayesasaza uBukumkani BukaYehova esidlangalaleni. Oko kwatshintsha. INcwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-1943 yathi: “Ingxelo edityanisiweyo ka-1942, enoba ayigqitywanga, ngenxa yokusilela ukuqhagamshelana, isikelelekile . . . , ngoba ibonisa ukuba ehlabathini lonke kukho abavakalisi abangaphezu kwe-106 000 abafaka ingxelo yomsebenzi wokushumayela iindaba ezilungileyo.” Nangexesha leMfazwe Yehlabathi II, abantu abaninzi bayamkela inyaniso yeBhayibhile. Ngo-1950, iMerika iyodwa nje, yaba nabavakalisi abangaphezu kwe-100 000.
Ilizwe elilandelayo ukufikelela kubavakalisi abayi-100 000 yiNigeria ngo-1974.
Ngonyaka olandelayo inani labavakalisi eBrazil naseJamani lalingaphezu kwe-100 000. Ulwando olunjalo kumazwekazi amane lungqina ukuba ehlabathini lonke, abantu bafuna inyaniso yeBhayibhile.
Kwihlabathi lonke, inani labantu abamkela iindaba ezilungileyo laqhubeka likhula. Oku kuhambelana noko kwathethwa kwangaphambili yiBhayibhile: “Omncinane uya kuba liwaka, nophantsi abe luhlanga olunamandla. Mna, Yehova, ndiya kukukhawulezisa oko ngexesha lako.”—Isaya 60:22.
Ngokusekelwe kwingxelo yonyaka wenkonzo ka-2014, kukho amazwe ayi-24 anamaNgqina angaphezu kwe-100 000. Aquka iVenezuela, eyafikelela elo nani ngo-2007. Kwihlabathi lonke, kukho amabandla amaNgqina KaYehova ayi-115 416 nabavakalisi abayi-8 201 545.
Amazwe anabavakalisi abangaphezu kwe-100 000
ERepublic of Korea